Madagascar, chitsuwa chakanaka kumabvazuva kwekondinendi ye Africa | Absolut Kufamba
Madagascar chitsuwa chikuru chiri mu Indian Ocean uye kubva kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwemahombekombe e Africa. Nekereke yekutanga yechiPutukezi yapfuura uye yakazotevera French, yakawana kuzvitonga muna 1960. Patinozvifunga, tinofungidzira chitsuwa chizere nehunhu hunofadza masango ebhaobab uye inogarwa neushamwari lemurs.
Uye ine zvakawanda zvese izvi, asi Madagascar yakatambura kutemwa kwemasango kunotyisa mumakumi emakore apfuura. Zvisinei, chimwe chezvakanaka zvikuru zvinoramba zviri mapaki echisikigo iyo inovhara ingangoita nyika yese uye ine nzvimbo dzinenge dzisina mhandara iwe dzaunogona chete kuwana neanotungamira gwara. Anokosha beaches uye bope maguta zadzisa zvaunoda iwe Madagascar. Kana iwe uchida kuzviziva, tinokukoka iwe kuti uenderere mberi nekuverenga.
1 Zvokuona muMadagascar
1.3 Isalo National Park, chimwe chishamiso kuona muMadagascar
1.5 Mamwe mapaki emunyika kuti aone kuMadagascar
1.6 Zvitsuwa zveMadagascar
1.7 Antananarivo, guta guru reMadagascar
2 Ndeipi nguva yakanakisa yekuti iwe ushanyire Madagascar
3 Zvokudya muMadagascar
4 Ungasvika sei kuMadagascar
Zvishoma kukura kupfuura Spain, musiyano uripo pakati pehunhu hunonakidza hwemukati mayo nemahombekombe akanaka emahombekombe ayo ndeimwe yehunhu hweMadagascar. Tichatanga nekutaura newe nezve mapaki ayo emunyika uye nezve maguta ayo.
Iine mahekita angangoita mana, ino sosi ndeye mhedzisiro yechirongwa chevaMalagasy vemuno, avo vanoona nezve kuitarisira mu inogona kuenderera. Vakazviita zvakanyanya kuchengetedza huwandu hwemalamur. Muchokwadi, kana iwe uchida kuona idzi mhuka, imwe ye zviratidzo zvenyikaAnja yekuchengetedza ndiyo nzvimbo yakanakisa, sezvo paine mazana mana.
Inowanikwa mu Dunhu reMelaki kubva kuMadagascar, ndiko Nhaka Yenyika. The tsngys Iwo ndiwo masango emakarsta ari mukati mawo mune akawanda mapako uye zvipuka zvinokonzerwa nemvura yepasi.
Naizvozvo, kushanya kwako kupaki iyi kunokutendera iwe kuti uone matombo mafomu, magedhi uye magedhi akasarudzika pasirese. Iwe unogona kuenda kuburikidza nazvo imwe kuburikidza neferrata izvo, zvakadaro, zvinopa kumwe kunetsekana sezvo iine zvikamu zvakatwasuka uye zvakamira, pamwe nemapuratifomu akarembera.
Tsingy de Bemahara Natural Park
Iwe unogona zvakare kutora rwendo rwe Rwizi rweTsiribihina mune akasiyana echinyakare magwa. Unogona kuihaya mumuguta guru renyika, Antananarivo, asiwo mutaundi re myandrivazo, panotangira rwendo.
Isalo National Park, chimwe chishamiso kuona muMadagascar
Kana iwe wakashanyira iyo Grand Canyon yeColorado, unogona kuwana pfungwa yezvauchawana mupaki iyi. Nekudaro, usatarisira kutsvuka kutsvuka kana kushomeka kwegirini kubva pairi. Kune rimwe divi, iwe unowana makuru macanyon ane endemic chirimwa mhando uye, chokwadika, nema lemurs.
Iwe haugone (kana isu kukuraira) kuti ushanyire wega. Iwe uchafanirwa kuhaya a Yemunharaunda gwara mutaundi riri pedyo re Ranohira. Uye ndeyekuti kushanya kwepaki kunogona kugara kubva maawa mashoma kusvika kumazuva akati wandei.
Iri padyo neAntananarivo uye saka inowanzo shanyirwa nevanhu veMalagasy. Iyo ine angangoita zviuru gumi nezvishanu mahekita e nyoro sango uye nehukama hwakakura kwazvo. Asi kukwezva kwayo kukuru ndekwekuti ipapo iwe unogona kuona mhando hombe yemalamuroni: iyo inonzi indri-indri, iyo inogona kusvika pamasentimita makumi manomwe pakureba uye gumi makirogiramu muhuremu.
Mamwe mapaki emunyika kuti aone kuMadagascar
Kuti usagare zvakanyanya mumapaki uye kuti ugone kukupa iwe rumwe ruzivo rwekushanya kwako kuMadagascar, tiri kuenda muchidimbu dzimwe nzvimbo dzepanyama dzaunogona kuona pachitsuwa. Semuenzaniso, iye Andringitra National Park, nemakomo ayo ane matombo akakwana kukwira, uye uyo anaRanomafana, iyo chete umo iyo Ndarama yegoridhe, imwe mhando yemarimu.
Sezvaunoziva, nyika yeAfrica chitsuwa chikuru, asi zvakare ine akati wandei madiki aunofanirwa kushanyira. Iyi ndiyo mamiriro e sakatia, Mitsio o Tanikely, asi maviri akakosha uye ekushanya ndiNosy Be naSainte Marie.
Nosy Be Icho chitsuwa chine akawanda makomo anoputika pakaumbwa madziva akanaka. Zvizhinji zvacho zvinogarwa ne Lokobe Nature Reserve kunogara marudzi emhashu uye rimwe rematatya madiki pasi rese. Stumpffia Pigmaea. Asi pamusoro pezvose, chitsuwa ichi ndechimwe chezvinonyanya kukosha nzvimbo dzekushanya kuMadagascar kune kwayo mahombekombe akaisvonaka.
Kune rumwe rutivi, Sainte marie zvakare ine nzvimbo dzakanaka dzine jecha uye nzira dzekukwira makomo. Asi chimwe cheye chinokwezva chiri muguta rayo rakakosha, Ambodifotatra: ndiyo chechi yeSanta Maria, yekutanga kuvakwa muMadagascar sezvo yakatanga kubva muna 1857.
Antananarivo, guta guru reMadagascar
Mushure merwendo rwedu kuburikidza nezvinoshamisa zvisikwa zveMadagascar, isu tave kuenda kunoziva maguta aro makuru. Antananarivo ndiro guta guru uye iri pakati penyika. Kuti uishanyire, tinokurudzira kuti uende nemutungamiri nekuti ine nzvimbo dzine njodzi.
Mariri iwe unogona kuona iyo Mambokadzi Rova muzinda, chinova chivakwa patsva. Iyo yekare yakanga iri chikamu chechuru chakatsva muna 1995. Asi zvakakosha kuti iwe uzvipfeke kuti uzive nhoroondo yeiyo Humambo hweImerina Kana, mune mamwe mazwi, kubva pre-colonial Madagascar.
Iwe unogona zvakare kuona iyo Andafiavaratra muzinda, kuvaka baroque nhasi kwashandurwa kuita Nhoroondo mamuseum. Dzimba mbiri idzi dziri muchikamu chekare cheAntananarivo, uko kune dzimwe dzimba dzechienzi dzakawanda.
Kune chikamu chayo, the Independence Avenue Ndiwo mugwagwa mukuru weguta uye mauri uchaona akawanda dzimba dzemaitiro echikoloni. Inotanga mune yakanaka Soroano chiteshi chechitima uye iwe unogona zvakare kuona mairi iyo Mutungamiriri wenyika.
Zvimwe zvakajairika ndeye Anakely musika, kwaunogona kunyudza hupenyu hwezuva nezuva hwevagari vemo uye uwane mhando dzese dzezvigadzirwa, kubva pane chikafu kusvika kumhizha. Pakupedzisira, unogona kushanyira muAntananarivo iyo Cathedral, Yakavakwa muna 1873 uye zvakare iyo Anasoy nyanza, chakagadzirwa uye pakati pechiwi chikuru uchaona chivakwa kune avo vakafa muhondo. Iri dziva riri munzvimbo isina kuchengetedzeka, saka unofanirwa kuve naro kutarisira.
Fona Diego Suarez Kusvikira nguva isiri yapfuura, iri guta riri kuchamhembe kwakanyanya kwenyika yaive imwe yemachiteshi aro makuru. Iyo iri muguta rino iri munzvimbo inoshamisa bay kubva iyo inobuda yayo chaiyo Chingwa cheshuga, chiwi chidiki chakatumidzwa kuti chakafanana negomo re Rio de Janeiro. Asi, pamusoro pezvose, Antsiranana anomira kunze kweiyo cosmopolitanism uye nenhaka yake inoshamisa ye french colonial buildings.
Iine vangangoita mazana maviri ezviuru zvevagari, ndicho chiteshi chikuru chenyika. Akakura panguva yekutonga kwa Radama IniPakati pegumi nemapfumbamwe century, hunhu hunosemesa aishandisa guta senzvimbo yekubva kune varanda vaaitengesa navo. Kunze kwemisika yayo yemigwagwa ine vanhu vakawanda, senge iri mu Bazary Be, haina zvimwe zvakawanda zvekukupa. Nekuti mahombekombe ayo akanaka asi mune mazhinji acho kushambira kunorambidzwa nekuda kwekusvibiswa uye mashark.
Pane kudaro, tinokukurudzira zvikuru kuti ushanyire guta duku iri. Ikoko kana iwe ukawana Anoshamisa mahombekombe kupi kugeza nekudzidzira mitambo yakadai sekayaking. Asi, pamusoro pazvose, nekuti inzvimbo iyo iwe yaunogona kuona inoshamisa Avenue yeBaobabs. Iyo inzira refu inotenderedzwa nemiti mizhinji yerudzi urwu, inonyatsoziva zvese chimiro uye nekureba.
Teerera zvakanyanya kune iyo baobab murudo, zvienzaniso zviviri zvakakura zvakabatana. Zvingaitwe sei neimwe nzira, ivo vane runako ngano yemuno. Izvi zvinoti ivo vanomiririra vanhu vadiki vaviri vanobva kumamisha akasiyana avo vaive murudo uye vakakumbira vamwari vavo kuti vave pamwe chete nguva dzose.
Ndeipi nguva yakanakisa yekuti iwe ushanyire Madagascar
Kunyangwe hazvo nyika yeAfrica iine mamiriro ekunze akasiyana siyana nekuda kwehukuru hwayo, kazhinji, mwedzi inotonhora zvikuru ndiChikunguru naNyamavhuvhu, neinodziya zvikuru ndiNdira, Kukadzi naMarch. Ramba uchifunga kuti nzvimbo yaro yenzvimbo zvinoreva kuti nhepfenyuro dzayo dzinogoverwa nenzira yakapesana pane kuSpain.
Nekudaro, iyo inodziya mwedzi inoenderana pamwe nemvura yekunaya uye dutu remhepo, saka haufarire kufamba pamazuva iwayo. Zano redu nderekuti iwe ushanyire Madagascar pakati paMay naGumiguru. Iwo tembiricha, kunyangwe iri nguva yechando, ine hunyoro uye inofadza nemvura shoma kwazvo.
Iyo gastronomy yechitsuwa cheAfrica ine chinhu chekutanga chinhu. mupunga. Zvakawanda zvekuti inoonekwa mukudya kwese kwezuva, kusanganisira chikafu chamangwanani. Saizvozvowo, inosanganiswa nezvose zvinenge: miriwo, nyama, hove uye kunyange michero yakadai sekokonati.
Chaizvoizvo chairo dhishi par kugona kweMalagasy ndiyo mupunga ne zebu. Iyi bovid ndiyo nyama yakakosha muMadagascar, kunyange huku yakawanda ichidyiwawo. Muchokwadi, kana vakakupa akoho s uye voanio Iyo mupunga une huku uye coconut. Izvo zvakare zvakajairika munzvimbo dzemahombekombe iyo hove mumuto wecoconut. Kune rimwe divi iyo foza s na henakisoa Iyo yakakangwa nyama yenguruve nemupunga.
Kune rumwe rutivi, amalone inyama yenguruve; lasopy muto wemuriwo; iyo sesika Iyo mhando yerudzi rweropa sausage iyo inoshandiswa, chokwadika, nemupunga uye bhinzi uye iyo ravitoto inogadzirwa nemufarinya wakatswanywa uye unofambiswa ne zebu kana nyama yenguruve.
Nezve madhiri, mofo gasy uye mokari Imhando yemupunga paniki uye iyo koba Ikeke rine hupfu hwemupunga, huchi, nzungu nemapistachios. Pakupedzisira, une zviviri zvinwiwa zvinwiwa. Ranon'ampago Inogadzirwa nemupunga unonamira pamapani kana wabikwa uye iyo Yakarongwa rum Ndiyo ramu yechitsuwa icho chine vanilla neuchi.
Ungasvika sei kuMadagascar
Nhandare huru iri munyika ndeye Antananarivo asi zvakare zviri zvepasi rese izvo zve Nosy Be. Ikozve kune dzimwe nhandare dzendege mumaguta senge Toamasina, asi ine chete nendege dzemukati.
Pane imwe nguva muMadagascar, unofanirwa kuyeuka kuti kufamba hakusi nyore. Iyo migwagwa mishoma uye mune yakashata mamiriro. Kunyangwe izvi, iyo yekufambisa par kugona pachitsuwa kwerwendo rurefu kunodaidzwa taxi-brouse. Iyo mhando yevha kana kombi iyo iwe yaunofanirwa kugovana nevamwe vafambi. Ramba uchifunga kuti nzira idzi dzakareba uye dzinorema saka uchave nenguva yekusangana nevanhu vakanaka veMalagasy.
Kune zvakare njanji. Izvo zvinowanzoitika ndizvo zvinonzi Jungle Chitima, iyo inoita rwendo kubva kunzvimbo dzakakwirira kuenda kumahombekombe. Rwendo rwunoitwa neyekare uye isina kugadzikana convoy iyo inotora anopfuura maawa manomwe parwendo rweasinga pfuure mazana maviri emakiromita Nekudaro, chiitiko ichi hachikanganwiki zvese nekubatana nevanhu vemo uye neiyo Anoshamisa maonero Chii chinopa.
Chekupedzisira, kuti ufambe mukati memaguta makuru, iwe unayo kupousse pousse, ayo akafanana neakakurumbira Rickshaw kubva kuIndia nedzimwe nyika dzeAsia.
Mukupedzisa, kuenda kuMadagascar kuchave zvisingakanganwiki. Iwe uchaona inoshamisa nharaunda, mamwe akasarudzika pasirese, iwe uchaziva maguta ane vanhu vazhinji, iwe uchafarira inonaka gastronomy uye iwe uchazvinyudza iwe mune imwe tsika. Kunyangwe zvese izvi, tinokukurudzira kuti utore matanho maererano nechengetedzo yako nekuti chitsuwa cheAfrica hachina kunyarara sezvachinofanira kuve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Madhagasika